Trailer Brake ကို ဘယ်အချိန်မှာ အစားထိုးသင့်လဲ။- Shanghai KTG Auto Technology Co., Ltd.
သင့်နောက်တွဲယာဉ်တွင် ဘရိတ်အသစ်များ တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ တိကျသေချာသောအချက်မရှိပါ။
ယင်းအစား၊ စက်ပြင်နှင့် ဘရိတ်ထုတ်လုပ်သူများကလည်း သင့်ဘရိတ်၏ ယေဘူယျအခြေအနေအား အသိပေးရန် ကူညီပေးရန်အတွက် အချို့သောပြောင်းလဲမှုများကို ခြေရာခံရန် အကြံပြုပါသည်။သင့်နောက်တွဲယာဉ်၏အလေးချိန်၊ ဆွဲငင်သည့်အကြိမ်ရေ၊ ခရီးအကွာအဝေး၊ ကားဆွဲမြေပြင်နှင့် မောင်းနှင်မှုပုံစံတို့ကဲ့သို့ ဤပြောင်းလဲမှုများသည် နောက်တွဲဘရိတ်အစားထိုးအချိန်ဇယားများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။
သို့သော်၊ သင်၏နောက်တွဲ၏ဘရိတ်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် သမာဓိကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် မှတ်တိုင်အချို့—အပြင် သင့်ဘရိတ်၏လက်စွဲမှ တိုက်ရိုက်အကြံပြုချက်များ—နှင့် သင်၏တွဲဆွဲကြိုး၏ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေသည်။
1. Manually Adjusted Brakes အတွက် မိုင် 200 တွင်
မိုင် 200 အမှတ်အသားအနီးတွင် ၎င်းတို့၏ဘရိတ်များကို စစ်ဆေးပြီး ချိန်ညှိထားသော အသစ်စက်စက်၊ အသစ်စက်စက် အရောင်းရဆုံးနောက်တွဲယာဉ်များကို ကြည့်ရှုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
မိုင် 200 ခန့်အကွာတွင် ဘရိတ်ဖိနပ်များနှင့် ဒရမ်များသည် ဘရိတ်၏အတွင်းပိုင်းတပ်ဆင်မှု၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု “ထိုင်” ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။သင့်လျော်စွာထိုင်သည့် ဖိနပ်များနှင့် ဒရမ်များသည် သင့်ဘရိတ်စနစ်၏ လျှပ်စစ်သံလိုက်နှင့် အူတိုင်ဘရိတ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာတို့နှင့် အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိသည်။အတူတူ၊ ဤအပိုင်းများသည် ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံရှိ ဘရိတ်ကို ဖိလိုက်တိုင်း သင့်နောက်တွဲကို ရပ်တန့်သွားစေသည့် ပွတ်တိုက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ဖိနပ်နှင့် ဒရမ်များကို မှန်ကန်စွာထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ဘရိတ်လုပ်ငန်းစဉ်သည် နှေးကွေးခြင်း၊ ထိရောက်မှုမရှိသော သို့မဟုတ်—အဆိုးဆုံးအခြေအနေ—ပင်လျှင် အန္တရာယ်ရှိသည်။
မိုင် 200 ဘရိတ်စစ်ဆေးပြီးနောက် နောက်တွဲဘရိတ်များကို ယေဘူယျအားဖြင့် တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ နှစ်စဉ်လိုင်စင်စစ်ဆေးခြင်းကာလအတွင်း သို့မဟုတ် သင်၏နောက်တွဲယာဉ်ဆွဲသည့်အကြိမ်ရေ လိုအပ်သလောက် အကြမ်းဖျင်းစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
2. မိုင် 12,000 တွင်
နှစ်စဉ် ဘရိတ်စနစ် စစ်ဆေးခြင်းအပြင်၊ ဘီးပေါက်များကို မိုင် ၁၂၀၀၀ တိုင်း အကြမ်းဖျင်း ချောဆီပေးသင့်သည်။လမ်းပေါ်တွင် မိုင်ပေါင်းများစွာမြင်ရသော ခရီးကြမ်းတွဲများ နှင့် ပဉ္စမဘီး RV များ ပုံမှန်ဆွဲထားသောအတွက်၊ ထိုအချိန်ဇယားများသည် ပို၍မကြာခဏဖြစ်နိုင်သည်။
သို့ရာတွင်၊ အဆီ သို့မဟုတ် "ထုပ်ပိုးခြင်း" ဝက်ဝံများသည် ဝက်ဝံများကို အစားထိုးခြင်းနှင့် မတူကြောင်း သတိပြုပါ။သို့ရာတွင်၊ ၎င်းတို့နှစ်ခုသည် ဘရိတ်အသစ်များ တပ်ဆင်ရာတွင် အတွင်းဘက်နှင့် အပြင်ဘက် ဝက်ဝံများကို ဝင်ရောက်ရာတွင် တူညီသော လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည်။
သင့်နောက်တွဲပိုင်ရှင်၏လက်စွဲတွင်ဖော်ပြထားသောဘရိတ်အကြံပြုချက်များကိုစစ်ဆေးပါ သို့မဟုတ် သင့် axle ထုတ်လုပ်သူမှထုတ်လုပ်သည်။ထိုလက်စွဲစာအုပ်သည် သင့်မော်ဒယ်၏ သီးခြားဘရိတ်အစိတ်အပိုင်းများကို တပ်ဆင်နည်းနှင့် အစားထိုးနည်း၊ ဖိနပ်ထိုင်ခုံများကို ချိန်ညှိရန်နှင့် သင့်ဝက်ဝံများကို စနစ်တကျထုပ်ပိုးနည်းအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အဆင့်ဆင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ရှင်းပြသင့်သည်။
4. ဘရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဒုက္ခရောက်သည်။
သင်၏နောက်တွဲဘရိတ်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုံသဘောကို ကျင့်သုံးပါ။ဆူညံသောဘီးဝက်ဝံများ၊ ထူးဆန်းသောဘရိတ်နောက်ကျမှုများ သို့မဟုတ် ဘရိတ်ဖိအားများတွင် ကွဲပြားမှုများကို သတိပြုမိပါက၊ အစိတ်အပိုင်းများကို စစ်ဆေးရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။ဘရိတ်ဖိနပ်ကို ချိန်ညှိခြင်း မဖြတ်ရသေးပါက၊ စနစ် အစားထိုးမှု ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Caliper Saab Jak ဘရိတ် Caliper Semi Loaded Caliper ပုံသေ Caliper Teal Brake Calipers ဘရိတ် Pads Discs နှင့် Calipers ကုန်ကျစရိတ်